यस्ता आठ काम गर्नुहोस रोग लाग्दैन | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य चैत्र २२ २०७४ ekhabarnepal
रोग किन लाग्छ ? यसको सोझो जवाफ हो, हाम्रो आफ्नै कमजोरीले । अर्थात खानपान, दिनचर्या आदिमा गरिने गडबडी ।
हामी दिनदिनै रोगी हुँदैछौं । रोगी कसको कारणले हुँदैछौ ? जवाफ हो, आफ्नै कारणले । खासगरी हाम्रो यस्ता आनीबानी, जसले रोगी बनाउँछ । बाह्य खासगरी वातवरणिय कारणले पनि हामीलाई कमजोर बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा बंशानुगत कारण हामी रोगी बन्छौं । तर, त्यो भन्दा बढी चाहि हामी आफ्नै खराब जीवनशैलीको कारण रोगी बन्छौं ।
तर, हेक्का राख्नुपर्ने चाहि के भने अहिले धेरैजसो सागसब्जीमा विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । किटनासक औषधी प्रयोग गरिएको सागसब्जीले स्वास्थ्यलाई विषाक्त बनाउँछ । संभव भएसम्म आफ्ना लागि आफ्नै बारी, बगैंचामा सागसब्जी उत्पादन गर्नु राम्रो हो । त्यो संभव नभए, बजारबाट खरिद गरिएको सागसब्जी आधा घण्टा जति सफा पानीमा डुबाएर राख्ने ।
भनिन्छ, स्वस्थ्य व्यक्तिको पेट उनको मुट्ठी बराबर हुन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यप्रति लापरवाही व्यक्तिको पेट फूटबल साइजको हुन्छ । सुन्दा हाँसउठ्दो लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य कुरा हो ।तपाईले ख्याल गर्नुभएको छ/छैन, खानाप्रति आशक्ति हुने व्यक्तिहरु रोगी हुन्छन् । धेरै खाने, मिठोमसिनो खाने व्यक्तिलाई रोगले समात्छ । लामो आयु बाँच्ने एक बृद्धाले भनेकी थिइन्, ‘थोरै खाउँ, धेरै बाँच ।’ धेरै खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन । धेरै खाँदैमा शरीरलाई आवश्यक पोषण पुग्छ भन्नु भ्रम हो । बरु पेटभर खानेकुरा खाँदा त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ ।
त्यसैले हरेक छाकमा थोरै भोक पनि लिएर उठौं ।
राती ९ बजेदेखि १० बजेसम्म सुत्नुपर्छ । बिहान सूर्योदयअघि उठ्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य जीवनका लागि राती सात वा आठ घण्टा सुत्नैपर्छ । सुर्योदयअघि नै उठ्ने हो भने राती चाडै सुत्नैपर्छ ।
प्रविधिको जमाना छ । डिजिटल युगमा प्रविधिलाई पन्छाएर अघि बढ्न संभव छैन पनि । सजिलो र छरितो कार्य-सम्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्छ ।तर, प्रविधिप्रति हाम्रो परनिर्भरता यसरी बढ्दैछ कि त्यसले स्वास्थ्यमा गंभिर असर निम्त्याउँदैछ । अहिले हामी हरक्षण मोवाइल, ट्याबलेट, ल्यापटपमा विताउन थालेका छौं । यसले एकातिर हामीलाई शारीरिक रुपले निस्क्रिय बनाउँदैछ भने, अर्कोतिर त्यसबाट उत्पन्न विकिरणले स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँदैछ ।
बिहान ओछ्यान छाड्नुअघि नै मोबाइलको स्क्रिनमा खेल्न थाल्छौं । थोरै फुर्सद पाउनसाथ फेसबुक चलाउन थाल्छौं । जबकी यस्तो समयमा हामीले बाहिर हिँडडुल गर्नुपर्ने हो । ताजा हावा खानुपर्ने हो ।
प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने र फुर्सदको समयमा हिँडडुल गर्ने, टहल्ने गरौ ।
आफ्नो दिनचर्याको प्रारम्भ प्रातकालिन भ्रमण, व्यायामबाट गरौं । नियमित व्यायामले शरीर चुस्त, तन्दुरुस्त हुन्छ । रक्त संचार सही ढंगले हुन्छ । व्यायामलाई दिनचर्याकै एक हिस्सा बनाउन सके धेरै किसिमको रोगले संक्रमण गर्दैन । किभने नियमित व्यायामले शरीर स्वस्थ्य हुन्छ । शरीर स्वस्थ्य भएमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि हुन्छ ।
हरेक दिन योग गरौं, ध्यान गरौं । योगले शरीरको समूचित व्यायाम हुन्छ ।